श्रीशाके १९४१ नेपाल सं. ११४० परिधावी नामक सम्वत्सर शिशिर ऋतु वि.सं. २०७६ फाल्गुण ८ गते तद्अनुसार सन् २०२० फरवरी २० तारिख विहीबार फाल्गुण कृष्णपक्षको द्वादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ९ः८ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिद्ध योग ९ः६ पर व्यतिपात योग तैतिल करण आनन्दादिमा धाता योग चन्द्रमा धनु राशिमा १५ः१८ बजेसम्म त्यसपछि मकर राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः४० मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः५७ मा हुने । प्रदोष व्रत, सामाजिक न्याय दिवस ।
मिथुन – स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । चोटपटक नलागोस् भनेर ध्यान राख्नुपर्ला । खर्च बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । पढाइ लेखाइमा रुचि बढाउनु पर्ला । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा ध्यान राख्नु पर्नेछ । इष्टमित्रसितको सम्बन्धमा ध्यान राख्नु बेस रहला । प्रेमपात्रसितको व्यवहारमा सचेत रहनुपर्नेछ । कठोर परिश्रमले सफलता पाउनुहुनेछ । भागदौड बढ्ला । इष्टमित्र प्रेमपात्र सन्तान आदिको साथ पाउनुहुनेछ । गीतसंगीत कला साहित्य आदि क्षेत्रसित सम्बन्धित काममा सफलता पाउनुहुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । विलासप्रति रुचि बढ्नेछ । नियमकानूनलाई उपेक्षा नगर्दा हितकारी रहला । जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
सिंह – सुख शान्ति र समृद्धि बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै आँट–उत्साह पनि बढ्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक कलात्मक आदि कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यात्रापरक र लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा पनि सफलता मिल्ला । साहसिकताको क्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त होला ।
कन्या – शुभ र भाग्यबर्द्धक काम बन्नेछ । प्रेममा रुचि बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । इष्टमित्र सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । सुख सम्पतिमा बढोत्तरी हुनेछ । मान महत्व बढ्ला । आर्थिक काममा सफलता भेट्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमीरहनु हुनेछ ।